Yakanakisa RO yekuchenesa mvura pasi pe10000 muIndia - ALinks
Nehuwandu hwezviitiko zvehurwere hunokonzerwa nemvura yakasviba. Zvave kusungirwa kuisa yekuchenesa mvura mudzimba dzese. Mhando dzinoverengeka dzinogadzira mvura yekuchenesa vachishandisa matekinoroji akasiyana. Kent, AO Smith, Aqua Guard, HUL, Tata Swach, nevamwe vazhinji vari pakati pezviratidzo zviripo. Reverse Osmosis, UV uye TDS, ari pakati petekinoroji anoshandiswa mune aya ekuchenesa mvura. Vatengi vanogona kusarudza kubva kwakasiyana siyana mvura yekuchenesa. Izvo zvinopa ese kana mamwe eetekinoroji, zvinoenderana nezvavanoda. Vanochenesa mvura vane zvakare zvine mwero nzvimbo yekuchengetera mumalita.
Kana iwe uchigara mune nharaunda ine turbid mvura uye akakwirira TDS nhanho. Dzakadai seaya anowanikwa munzvimbo yekuchera uye yematangi emvura Iwe uchazoda RO yekuchenesa mvura yemhando yepamusoro. Iwe unogona kutora imwe yevanonatsa mvura pane yedu runyorwa rweYakanakisa RO Mvura Inonatsa muIndia pasi pe10000.
Kana yako yemuno mvura ine yakaderera TDS chiyero, yekuchenesa mvura kubva pane iripazasi pazasi inokwana pane zvako zvezuva nezuva zvaunoda. Ivo vese vanoshandisa reverse osmosis kutema masalt akanyungudika. uye ruzhinji rwavo runotova nekamuri yeUV yekuparadza hutachiona huri kazhinji inowanikwa mumvura.
Ndeapi akanakisa RO Mvura Anonatsa Under Rs.10000 muIndia?
Eureka Forbes AquaSure kubva kuAgaguard Amaze Buy @₹ 9,699.00
7L Kunatsa Mvura
The Dual RO + UV + MTDS tekinoroji mune ino yekuchenesa inoona kuti mvura yaunonwa yakachena zvachose. Yepamberi TDS Regulator inogadzirisa kuravira kwemvura zvichienderana nekwaanobva mvura. 6000 L yekuchenesa kugona
Chinatsa ichi hachireruke uye chinouya neyemberi TDS mutongi (MTDS). Izvo zvinokutendera iwe kuti uchinje kuravira kwemvura zvichienderana nekwaanobva mvura.
Kana iyo tangi yazara iyo uye simba-pane chinzvimbo inoratidzwa na smart LED zviratidzo.
Unogona iva nechokwadi kuti mvura iri 100% yakachengeteka kunwa iwe.
Chinatsa mvura ichi chinoita kuti uve nemvura yakachena yekunwa kwenguva yakareba nekuda kwayo 6000 L.
Munatsi uyu ane hombe 7-litre tangi, kuve nechokwadi chekuti hauzombopererwa nemvura yakachena, kunyangwe iwe uine vashanyi.
Rk Aquafresh Ro system muIndia ipiyona muhunyanzvi hwekuchenesa mvura yeUV. Utachiona, mabhakitiriya uye hutachiona vanoparadzwa ne Aqua Nyowani Ro Uv tekinoroji.
Anonatsa anoshandisa Reverse Osmosis system pamwe neUlt Violet kurapwa. Iyi yekuchenesa mvura ine dhizaini dhizaini uye tsoka diki. Kubvumira iyo kusefa kusvika 15 litita yemvura ichikodzera zvakanaka mukicheni yako.
Bhuruu Nyeredzi Aristo RO + UV + UF Tenga @ ₹ 8,499.00
Iyi yekuchenesa mvura kubva kuBlue Star inoratidzira reverse osmosis uye ultraviolet tekinoroji kuti ikupe iwe yekunwa yakachengeteka. RO pamwe neUV tekinoroji inobvisa kusachena uye hutachiona kubva mumvura yaunonwa, kuve nechokwadi chekuti uchiri nemvura yekunwa yakachengeteka. Iyo yekunatsa mvura ine chitarisiko chakanakisa pamwe nezvakanaka mhedzisiro. Yekuchenesa mvura yeBlue Star inogona kubata kumusoro 7 litita of mvura panguva. Iyo yekuchenesa mvura ine diki tsoka yekutsika uye mabhatani emagetsi ayo anobata-anobata. Iyo zvakare inosanganisira yekupa mvura iyo inokupa iwe nyowani, yakasvinwa mvura yekushandisa kwako.
Eureka Forbes Mvura Buy @₹2,990.00
Mhuri inokwanisa chete kubudirira mumamiriro ekunze ane hutano uye asina hanya. Iyo AquaSure Amrit neKitanu Magnet ndiko kuzvidzivirira kwako kwakavimbika pamabhakitiriya, mavairasi, uye cysts izvo zvinokonzeresa zvirwere zvinotapurwa nemvura AquaSure Amrit, inotsigirwa nekucheka-kumucheto tekinoroji kufambira mberi uye yakavakwa uine hutano hwako mupfungwa, zvinobatsira mukudzivirira kwezvirwere uye zvinokupa iwe yakachena uye yakachena mvura yekunwa, nenzira yaunoda iwe. 1500 litita katuriji hupenyu hunogara kusvika kumwedzi mina yemhuri yevana.
Kutsvaga Jobho muIndia? Tinogona Kukubatsira
Yakanakisa Smart Kupima Scale muIndia
Zvakanakisa Moms Co zvigadzirwa MuIndia! Tarisa Pano!
Zvakanakisa zvishongedzo zve iphone uk
Mahwendefa Akanakisa evadzidzi muUK
Nzvimbo Dzakanakisisa dzekushanya muIndia